Izindebe zigugile kwaye ziphahliwe kwiindawo
Kwinqaku elithi "Imilomo igugile kwaye iphahliwe emacaleni" siya kukuxelela indlela yokunceda umlomo wakho. Xa umlomo uphazamisekile, ngoko umomotheka uba yintlungu. Ukuba imilomo yakho iphihlile, ivuvule, ivuvuke, ngoko ukugqithisa okuncinci kungabangela ukuphuma kwegazi. Ngokuncedwa kwezi ngcebiso, unokubuyisela umlomo ngombala omnene, obomnyama. Emva koko umomotheka uya kubuya ubuso.
Ngendlela efanelekileyo, ukuze ukwazi ukulwa nemilomo echukumisayo, kuyimfuneko ukunqanda imozulu ebanda kakhulu. Ngaphambi kokuba uphume, sebenzisa i-balm emlonyeni wakho, kodwa kuba imbi emlonyeni, kufuneka uyisebenzise njalo xa usula umlomo wakho, uphuze okanye udle into ethile. Kwaye njenge-krimu, unokukhetha i-sunscreen. Ngaliphi na ixesha, ilanga lila umlomo, kwaye umntu makakhethe ukuba nemveliso kunye necreen sunscreen.
I-greasy lipstick, ngaphezu kwe-sunscreen inceda ukuba umlomo uphelele. Sekude ngokwayo, umlomo ukhusela kwaye ukhusela umlomo ukuba ungadli. I-Lipstick ihlunga ukukhanya, kwaye iquka ukukhanya okubonakalayo. Yaye inyaniso yokuba ngubani osebenzisa umlomo, le sizathu sokuba abafazi abanqabile ukuba nomdlavuza womlomo.
Imisindo kunye nokuphulukisa imilomo
Labo abanomlomo, baqhekeza, kukho ingozi yokuba intsholongwane ingena ngaphakathi, kwaye ukukhusela emlonyeni kufuneka usebenzise ioli kunye ne-antibiotiki, umzekelo "i-Polysporin" okanye "i-Bacitracin". I-ointment ne-hydrocortisone iya kuphilisa ukutyunjwa, kodwa abayi kukulondoloza kwintsholongwane. Kodwa ukuba umlomo uphuke kakhulu, ngoko ungayisebenzisa enye ekuseni, omnye ubusuku.
Ukungabi nobunzima bamavithamini B okanye isinyithi, ekuphambeni komlomo kudlala indima, ngoko kufuneka ubeke isitoreji nge-multivitamines.
Izindebe zinokumanyaniswa xa uphuza umthamo wamanzi. Udinga ukusela amanzi emva kweeyure ezimbalwa. Emva kwakho konke, amandla okwenziwa kweeseli ukugcina ukuhla kwamanzi kunye neminyaka, ngokukodwa oku kunyuka kubusika. Uya kunceda imilomo ebusika, kukuhlaziywa komoya eofisini nasekhaya.
Impendulo yodwa yemilomo ephahliweyo yi-"Carmex", ngaphandle kwayo yonke into iqulethe i-phenol kunye ne-arix, akukho nyeza inokuthelekiswa nayo.
Musa ukukloloda ngomlomo wakho
Xa ugoba umlomo wakho, usebenzise umswakama, uyaphuma, imilomo yakho iya kuba yimbi kunokuba ikhona kude kube ngoku. I-Saliva iqukethe i-enzyme yokutya, ayizuzi imilomo ephahliweyo. Imilenze yokulumala ingakhokelela kwisifo se-dermatitis, ngokuqhelekileyo kuyenzeka kubantwana, kodwa inokuthi ibe ngabantu abadala. Xa umntu athetha umlomo wakhe, ususa onke amafutha kuwo. Awudingi ukukloloda imilomo yakho ukuba ungayenzi, zama ukuzonwabisa ngokuhlekisa, ubeke imilambo emlonyeni wakho, ayiyi kuyenza lula imilomo yakho, kodwa emva koko awuyi kuphinda ukhawuleze umlomo wakho.
Inyosi yokuzinyathela ukuba uthathe umhlalaphantsi
Izindebe ziyakwazi ukugqithisa ngakumbi ngenxa yokuba zinobubele obukhulu kwizithako ezivuthayo eziqulethwe emlonyeni, uhlaziye i-gum, iesekese, i-toothpaste. Amathambo amathotho amatsha asusa ilitye anamandla kunamaqabunga aqhelekileyo anomlomo omile. Kwaye xa oko kwenzeka, kukulungele ukuyeka ukusebenzisa la mazinyo. Kungcono ukucoceka nge-brush yezinyo eziqhelekileyo okanye ukusebenzisa i-soda encane kule bhrashi.
Abanye abantu bathetha ephupheni, nje kuphela bomelela imilomo, kwaye kuyingozi ngakumbi xa umlomo uphazamiseka. Ukuba kukho ingxaki enjalo, unokufaka isicelo sokuthambisa nge-oxide ye-zinc yobusuku, kuya kukhusela umlomo.
Faka umunwe wakho ekhaleni
Kubalulekile ukubeka umunwe ngasempumleni, uze usihlabe emlonyeni, kuba ngale ndlela sele sele eqokelele ioli. Ziyimfuneko ngomlomo, kwaye ngokuqhelekileyo zifunyanwa ngokudibanisa nekhanda elikufutshane.
Ubusi kunye nocyulo omuncu
Cima imilomo yakho ekuseni nge-ukhilimu omuncu. Kwi-ukhilimu omuncu kukho inani elaneleyo leoli, kunokukhusela umlomo wakho kwimiphumo emibi yemozulu. Ngobusuku kufuneka utyumle umlomo wakho ngobusi, utshabalalise ibhaktheriya, uxhasa ukuhlaziywa kweeseli zesikhumba ebusuku.
Izindebe zithatha ntoni xa kuthengiswa. Thatha ibhulashi elithambileyo, elifakwe ngeoli ye-sage. Ukucoca ngomlomo wakho kwisisetyhula.
I-zinc sulphate ivuselela isikhumba somlomo. Kubalulekile ukusebenzisa i-gel emlonyeni kathathu ngosuku.
Ukuba umzimba awunayo i-biotin, oku kungasizathu sokuvuselelwa kwesikhumba semilomo. Le vithamini ibalulekile kwisondlo, ithabatha isulfure. I-Biotin ifumaneka kwimvubelo, i-almonds, i-sardines, i-nut, amaqanda e-egg, kwindawo ye-soy.
Uncedo oluvela ekhishini
Unokuyiphatha imilomo ephahliweyo kunye eyomileyo ngobusi okanye ibhotela. Zama ukungasebenzisi ubusi okanye ukhilimu wokutya, kodwa kunokuba usetyenziswe kwimilomo eyomileyo, ixesha elihle le eli liza kuhlwa.
Kungcono ukukhusela eso sifo kwaye umlomo uya kuba mnandi
- Jonga ubushushu kwigumbi, ubushushu obuqhelekileyo buya kuba ngama-20 okanye i-22 degrees. Ubuncwane obufanelekileyo, oku kufikeleleko xa umswakama ungama-40 okanye ama-50 degrees.
- Emva kokuhlamba okanye ukuhlamba, kufuneka uhlambulule umlomo kunye nesikhumba kunye ne-cream ephuculayo. Ukuze wenze oku, sebenzisa iziyobisi ngexabiso elincinci leoli. Ukusebenza kwe-krimu kunokunyuswa xa kuxutywe ne-apricot pulp, iyenzela i-elastic and revitalizes isikhumba, i-avocado pulp, isikhumba sinika amandla.
- Ikhumba elomileyo nelomileyo lomlomo lingasebenzisa ibhotela ye-cocoa.
- Musa ukusula owomileyo emva kokuhlamba okanye ukuhlamba, njengoko i-lotions kunye ne-creams zisebenza kakuhle xa zisetyenziselwa isikhumba samanzi.
- Gwema ukushisa ilanga, sebenzisa emlonyeni we-lipstick.
- Ebusika, soloko unxiba umlomo we-hygiene lipstick okanye u-balm,
"Kungcono ukunyamekela umlomo wakho ngaphambi kokulala."
- Inkqubo yokunakekela isikhumba
- Faka isamba esikhulu seVaseline okanye ibhalsamu emlonyeni, kwaye makhe uhlale emlonyeni wakho imizuzu embalwa. Emva koko, kunye nebhokisi lezinyo elixutywe ngamanzi okanye i-napkin efudumeleyo, gcina ngomlomo umlomo ukuba ususe isikhumba esilula, esomileyo. Emva koko sebenzisa umgca obuncitshisiweyo we-petroleum jelly okanye u-balm, kwaye umlomo uya kuphilisa.
- Ukuba imilomo isomile, ngoko kufuneka uthabathe umlomo, usebenzise phantsi kwe-lipstick, njengesiseko. I-Cosmetologists icebisa, de kube imilomo iphilise ngokupheleleyo, kungcono ukuyeka umlomo. Xa kufuneka uchithe ixesha elide elangeni, ukucima imilomo yakho kunye noomisa kunokusukela ekushiseni kwelanga, kufuneka usebenzise i-sunscreen.
Esinye isizathu somlomo omile singabangelwa ukungondleki. Ukusilela kwe-vitamins enyunyiweyo ye-B okanye isinyithi kuya kukhokelela ekugqibeleni komlomo, ngoko kubaluleke kakhulu: ukutya okunokulinganisela, ukuthatha i-multivitamines. Xa umlomo ufika kwindawo evamile, kubalulekile ukunqanda isikhumba esomileyo. Ungayisebenzisi imilomo eqhubekayo, ayomisa isikhumba, kwaye ayinayo i-oyile.
Iilungiso zomntu zokutyunja emlonyeni
- Izihlandlo eziliqela ngosuku kufuneka utyumle umlomo wakho ngeoli edibeneyo okanye ibhotela ebusayo, ngoko unokuyithambisa kwaye unike isikhumba nge-vitamin B.
- Xa ulungiselela i-casserole, thabatha umsila wejusi krotikiti kunye ne-cottage cheese, yenza imaski emlonyeni, ngoko umlomo uya kunikwa iivithamini A no-B.
- Ukuba umlomo uqubuzele kakhulu, kufuneka usebenzise ukhilimu ophumelelayo: thabatha ama-5 amagremu weengcambu zepotton uze uyisuse ibe ngumgubo, upheke kwi-200 gram yebhotile. Kule ukhilimu kukho i-vitamin B kunye neyeza.
- Ukuba umlomo uphelelwe, kufuneka ufudumise i-wax ikhandlela ngeoli ye-hemp. Ukuxuba kunye nokugcoba umlomo ngeli qela, ubusuku. Ekuseni yonke into iya kulungile.
- Ukuthintela inyosi yokugcoba inyosi okanye ijusi yemifuno, inika i-microelements, ikhupha kwaye inondla kakuhle imilomo.
- Amaphonkco kunye ne-abrasions baphathwa kakuhle nge-gruel kwi-bhotela ne-apula, ulusu luya kufumana ukutya okunomsoco kunye nonyango.
- Ukuba kukho iibomvu ezibomvu emlonyeni, ngoko ke, ulusu luya kuqalwa. Oku kuya kunceda ukuhlaziywa kwe-flaxseed, ngenxa yoko sithatha iipunipoli ezi-2 ze-flaxseed uze ufumane i-gruel. Ngolu hlobo, sizisa ubunzima kwilizwe le-gruel. Ngohlobo olunjalo, smear imilomo yakho.
- Ukulondoloza imilomo eyomileyo ingaqulunqwa ngesipuni esisodwa sesinqe kunye nama-rose petals. Konke oku kufuneka kuhluthwe kwaye kufakwe emlonyeni.
Prophylaxis kwaye kwakhona ukukhusela. Qaphela ukuba isikhumba emlonyeni asinakho ukungcola, ngokokuba ulusu aluchaphazelekanga kakhulu ngezilwanyana ezahlukeneyo kunye nezimo ezingekho phantsi. Umzimba unikezela inani elifunekayo lamafutha, ukulandelela izinto, iivithamini, ngoko akusayi kuba nesizathu sokuba uzibuze ukuba kutheni umlomo uphahla kwaye wome, uze ukhangele i-100%.
Ukugcina u-elasticity of the lips, do the exercises:
- Umele ululaze imilomo yakho kwaye uphawule, njengokungathi ucima ikhandlela, ukhulule umlomo wakho. Ngoko phinda ama-7 okanye amaxesha angama-10.
- Thatha umoya ophezulu uze ufake izihlathi zakho. Exhale kancinci, ngoko wenze njengokungathi ugxotha umoya. Phinda kathathu.
- Yitsho ngokukhawuleza izibhenqo ",", "," kunye "," y "," o ". Phinda u-7 okanye amaxesha angama-10.
- Phuma phambili emlonyeni, uvule umlomo wakho, ngokungathi intlanzi iphefumula xa iphefumula. Vala kwaye ukhulule umlomo. Phinda 10 okanye amaxesha angama-20.
- Hambisa umhlathi osezantsi uze wenze kunye ngomlomo ukuya ngasekunene nasekhohlo. Phinda 10 okanye amaxesha angama-20.
- Ukubambelela ngokubanzi kunokwenzeka ulwimi kwaye ulubambe iminyaka emi-2 okanye emithathu. Susa ulwimi kwaye ukhulule imizuzwana engu-1 okanye-2. Phinda amaxesha amahlanu.
Ukuphucula ukujikeleza kwegazi kwaye ugcine ukutshatyalaliswa kwemilomo, kufuneka wenze umzuzu wokukhanya umzuzu kunye neminwe yeminwe yakho, ukunyusa ukuhamba. Emva kokusilalisa, gcoba umlomo wakho ngekhilimu enamafutha, kwaye makhe uhlale emlonyeni wakho imizuzu eyi-10.
Ukubuyisela ukubukeka okunempilo kwesikhumba semilomo yokunyusa ukunyusa kunye nokutya okunomsoco kuya kunceda. Kudingeka kwenziwe 3 okanye 4 amaxesha ngeveki. I-mask isetyenziswe kwilinen ecocekileyo yomlomo kwaye ihlanjwe ngamanzi afudumele emva kwemizuzu engama-20 okanye engama-25 nge-cotton swab. Emva kwesigqubuthelo, sebenzisa umlomo, ucoceko lwe-lipstick, u-balm emlonyeni.
Ukuba isikhumba semilomo sinomhlaba oqhekezayo kunye nemifuko emincinci, i-mask ye-apula kunye nebhokisi iya kunceda. Hlaza i-grate ye-apula, udibanise ne-teaspoon yebhotela kwaye usetyenzise ugcino oluqingqiweyo emlonyeni.
Iikroti kunye nemaski yobusi isebenza kakuhle. Ukwenza imaski, thatha i-1 teaspoon yeoyile yemifino, faka amaconsi ambalwa ejusiji kunye ne-1 teaspoon yobusi. Hlanganisa izithako uze usebenzise imaski emlonyeni. Le maski ilungile ngesikhumba esomileyo.
Umask ovela kumxube we-cottage ushizi, ukhilimu omuncu, ujusi, ijisi lekhukhamba, uthathe iqondo lezinga eliphezulu, linokuchaphazeleka . Emva kwemaski, gcoba umlomo ngommbila okanye kwioli yeoli. Kwaye ke umlomo uya kukhanya.
Ukuze ulusu lomlomo ungalungiselele ioli ephilileyo yokuphilisa. Thatha i-½ indebe yeoli yomnquma, amancinci amahlanu amavithamini A kunye no-B. Hlanganisa kakuhle kwaye ugcine umxube kwindawo emnyama.
Ngoku siyazi ukuba imilomo yayigqityiwe kwaye yaqhekeka emacaleni. Ukwazi nokusebenzisa ezi ngcebiso kunye neengcebiso, unokubeka umlomo wakho ngendlela. Musa ukulibala ukuhlala ulindile kwaye unakekele ngomlomo wakho.
IJerch juice kwi-cosmetology
Ukunyamekela ekhaya kwesikhumba sengxaki
Ukunyamekela ubuso ekhaya
Ukunyamekelwa kwesikhumba ngokwexesha elide
I-Erectile ukungasebenzi kunye nokungasebenzi
Ziziphi iindiza zendalo ezona zincedo kakhulu?
Ingxaki yobundlobongela basekhaya - imiba yokuthintela
Imiziki yase-Ireland - izithethe kunye nenkululeko
Indlela yokwenza isisu se-elastic and good?
Indlela yokukhetha ukwenziwa kohlobo lwakho lobuso
Intliziyo igqityiwe ngamakhukhamba aqholiweyo
UDmitry Khrustalev - iphupha labo bonke abafazi, isithombe
Kwiindawo zokuhlala kwiSychelles
Sludial salad slu
Indlela yokubukeka ilungile kwisithombe
Iimeko ezithile ezibangela ukunyuka kwamanzi
Ukwahlukana emva kokuzalwa komntwana